Musharaxiinta oo war kasoo saaray shirka Afisyoone, eedeeyeyna Farmaajo | Puntlandes.com
Musharaxiinta oo war kasoo saaray shirka Afisyoone, eedeeyeyna Farmaajo
07 April 2021 (Puntlandes) Midowga Musharaxiinta oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Farmaajo ku eedeeyey in carqaladeyn joogto ah uu ku hayo wadahadallada lagu baadi goobayo doorasho wada ogol ah oo si nabad ah dalkan uga dhacda.
Sidoo kale golaha qoraalkan soo saaray ee Midowga Musharaxiinta ayaa madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ku eedeeyey inuu amray in mas’uuliyadda amniga garoonka diyaaradaha laga wareejiyo Booliska kastamka oo weligiis gacanta ku hayn jiray, laguna wareejiyo ciidanka Haramcad, si uu khalkhal u geliyo amniga wafuudda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland, loogana hor istaago kulammada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta, xildhibaannada iyo qaybaha kale ee bulshada.
“Goluhu wuxuu ku ammaanayaa madaxda dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland oo muddo bil ah ku sugnaa magaalada Muqdisho, dhabar adayga iyo sabarka ay muujiyeen, welina ay diyaar u yihiin in shirku sii socdo, si loo helo doorasho wada ogol ah oo si nabad ah ku dhacda, halka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday uu ku dhawaaqay in shirkii burburay,” ayaa lagu yiri qoralka midowga musharaxiinta.
Ugu danbeyntii Golaha oo bogaadiyey dadaalka ay beesha caalamku ugu jirto in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, waxayna ugu baaqeen madaxweyne Farmaajo inuu shirka dib ugu laabto, si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho wada ogol ah, oo si nabad ah ku dhacda. Hadii aysan taasi dhicina ay umadda Soornaaliyeed iyo beesha caalamka u caddaynayaan in madaxweyne Farmaajo uu qaadayo mas’uuliyadda fashilka ku yimaada shirka, tahayna in lagula xisaabtamo.